AdraInformatica - Technology, Hardware, Software, Guides & Apps
Teknolojia, Fitaovana, Rindrambaiko, Tari-dàlana & Fampiharana
Navoaka tamin'ny 23 Aogositra 2021
Torolàlana ho an'ny lalao video Bayonetta 3
Bayonetta 3 no fizarana fahatelo, voarindra sy novokarin'i PlatinumGames, amin'ilay hack malaza sy slash saga malaza asehon'ilay mpamosavy malaza. Ny lalao video dia natao manokana ho an'ny Nintendo Switch, ny Nintendo console.
Lalao video izay tena atolotra ny mpankafy ny lalao rehetra dia ny Bayonetta 3. Ity lalao video ity isaky ny lasa fantatry ny mpanaraka azy io ary ireo izay manapa-kevitra ny hanandrana azy. Ary fantatra tsara fa mahatalanjona ny filalaovana ny lalao Bayonetta 3.
Amin'ity torolàlana manaraka ity dia hahita fampahalalana izay hanombohana milalao Bayonetta 3 ianao ho mora kokoa aminao. Ho fanampin'izany, manana torohevitra izy hanombohana milalao ny lalao nefa tsy mila voromailala latsaka avy amin'ny akaniny, satria na dia mety tsy ho manam-pahaizana ianao, farafaharatsiny hianaranao ny fototra.
Rahoviana no premiere ny lalao?
Iray amin'ireo daty andrasana indrindra ho an'ireo mpankafy an'i Bayonetta 3 es daty namoahana, amin'izao fotoana izao dia havoaka ny lalao video ary ho hita ao amin'ny misy consoles-misy. Ny iray amin'ireo zavatra tadiavina indrindra dia ny fahalalana ireo fotoana rehetra hanararaotany sy ny vaovao hahataitra ity vahoaka manaraka ity.
Torohevitra hivoahana ao amin'ny Bayonetta 3
Mety noho izany ny manomboka manonona ny fika izay hahasoa anao, amin'ny tanana Bayonetta 3 eo am-pelatananao, afaka manana lalao misy valiny tsara lavitra ianao. Ireto misy sasany.
Mahazoa traikefa ary hampiakarana ny haavonao: Ny fanatsarana sy ny fisongadinana dia hanome anao fotoana bebe kokoa ary hahazo tombony mihoatra ny sisa amin'ny mpilalao ianao. Ity no fomba hiakaranao sy hanatsaranao ireo mety ho toetranao, ary koa ny fahaizanao.
Fantaro izay ananan'i Bayonetta 3: Tsy hisy fitaovam-piadiana tsara noho ny vaovao. Ny fitadidiana ao an-tsaina hoe inona avy ireo fitaovana apetrak'ilay lalao video handraisanao ny sakana dia ilaina hamahana ny olana haingana araka izay tratra
Manatanteraka paikady vaovao: Na dia nanangana iray aza ianao tetika izay ahazoanao aina, aza atsahatra ny fanandramana zava-baovao, satria manome anao ny fahitana teknika mahasoa izay hanampy anao hihatsara.
Ataovy miavaka ny fanaraha-maso sy ny fanovana: Ovao ny maranitra, ny fifehezana ary ny fikirana rehetra azonao atao mba hahamora ny filalaovana anao. Ny fanamboarana ny fanaraha-maso dia ahafahanao mampifanaraka ny lalao amin'ny filanao mba ho tsara kokoa ny valiny.
Sehatra ahafahanao manandrana Bayonetta 3
Soa ihany, ny lalao video azo lalaovina amin'ny konsole isan-karazany sy amin'ny PC, avy eo, tsy misy fialan-tsiny hampiatoana ny fitsapana ilay kinova izay havoaka. Ny sasany amin'ireo safidy hafa izay ho azo ampiasaina mba hilalaovana azy amin'ny console dia PlayStation y Xbox, izay ahafahanao manana izany milalaova amin'ireo mpilalao hafa amin'ny Internet na milalao lalao eo an-toerana raha tianao.
Toy izany koa no hahitana izany milalao amin'ny rahona amin'ny alàlan'ny sehatra toa an'i Steam sy Stadia ho an'ny PC. Ny fampiasana azy ireo dia tsy mila manana console farany eo amin'ny tsena na solosaina misy fampiasa manokana ianao manana lalao mahafinaritra be.
Ny tadiavin'ny mpamorona azy dia ny fahafahan'ny olona betsaka araka izay azo atao miditra Bayonetta 3. Ka havoaka amin'ny kinova samihafa Tsotra sy mahafinaritra ny lalao hilalaovana, miankina amin'ny tsironao izany.
Raha tsy afaka mividy ny kinova rehetra tadiavinao ianao ary mila manapa-kevitra amin'ny iray monja, aza manahy, ny kinova rehetra dia manana fialamboly lehibe ary manome antoka fa hankafizinao lalao tokana na amin'ny isam-batan'olona na amin'ny vondrona.
Maniry hahazo Bayonetta 3 ve ianao? Eto ny solonao
Raha izay no tianao mahazo bayonetta 3, mila mitsidika ny anao fotsiny ianao magazay tianao indrindra, ho any amin'izay alehanao foana. Aorian'ny nahatongavan'ny daty famoahana dia azonao atao ny mamantatra azy amin'ny konsole rehetra misy amin'ny vidiny mirary.
Ara-dalàna izany mihoatra ny zava-drehetra lalao ho an'ny konsoly toy ny PlayStation, na Xbox; console izay ahitan'ireo Gamerany tena milamina sy mahafinaritra azy ireo ny fananana kinova am-boalohany ny lalao.
Safidy hafa, raha tsy te hiala ny tranonao ianao, dia miantsena an-tserasera. Azonao atao ny mamaky azy ireo magazay lalao video an-tserasera, na koa amin'ny sehatra an-tserasera, amin'ny fomba tsotra sy azo antoka.
Si miantsena amin'ireto fivarotana an-tserasera ireto, mamonjy fotoana sy ezaka ianao ary ho tonga eo am-baravaran'ny tranonao ny kaomandinao, na azonao atao koa ny mangataka kinova virtoaly, sintomy ary apetaho amin'ny console.
Fa koa ny sehatra toa an'i Stadia na Steam, dia mamela anao hankafy aorian'ny fandoavana ny fandoavam-bola, amin'ny fampiasana ireo mpizara azy ireo, izay midika fa afaka milalao ianao raha mifandray amin'ny Internet sy eo ambanin'ny famandrihana.
Ny fandraisana io serivisy io dia midika, amin'ny fotoana fohy, a fivoahana kely kokoa noho ny fividianana lalao tany am-boalohany, miampy mamela anao hilalao lalao maro isan-karazany mandritra ny fotoana voafetra.
Mianara milalao Bayonetta 3
Tsy misy azo antoka kokoa noho ilay hoe Mampanan-talenta ny fampiharana, ary ny fomba tsara indrindra hahatongavana ho tsara indrindra amin'ny zavatra iray dia ny fampiharana azy. Arakaraka ny anaovanao asa iray no mahalasa manam-pahaizana anao.
Toy izany koa no mitranga amin'ny lalao. Arakaraka ny itiavanao ny veterana no handraisanao bebe kokoa sy ny ati-dohanao hanana fahaizana manangana paikady sarotra kokoa. Ka raha izay no tadiavinao dia mianatra milalao Bayonetta 3 Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny fitoniana ary manazatra matetika.
Mba ho tsara indrindra dia tsy maintsy atao koa mifanena amin'ny fahavalonao. Ny fomba fihetsik'izy ireo, ny paikadin'izy ireo sy ny teknikan'izy ireo. Mba hahatakarana azy ireo dia ilaina ny mamakafaka azy ireo tsara. Ireo no zavatra mety hahasoa anao handresy azy ireo. Ho azonao atao ny mamantatra hoe inona ny tanjany sy ny fahalemeny. Ary koa, ilainao fantaro ny fihetsiky ny mpanohitra anao. Na NPC izy ireo na tena mpilalao dia samy mampihatra fahaiza-manao sy paikady izay, raha fantatrao izy ireo, dia afaka mahita ny fomba fanesorana azy ireo mora foana ianao ary ho tsara indrindra.
Raha azonao atao ny mamakafaka azy ireo araka ny tokony ho izy dia ho hitanao ny fahalemen'izy ireo ary ho fantatrao ny fomba hanararaotana ny hadisoany. Ny fahalalana ny mpanohitra anao dia manome tombony anao mihoatra azy.
Andraso anefa fa tsy mifarana amin'ny mpanohitra ny fanontaniana. Hankany amin'ny sehatra izay hahatonga anao ho matanjaka be ianao, ka hanao ny tenanao ho fahavalonao manokana, amin'ny fomba tsara. Saintsaino ny paikadinao manokana ary miasa mba ho tsara kokoa isan'andro. Afaka ny ho tsara kokoa hatrany ianao.
Amin'ny fotoana izay mandalina ireo mpifaninana hafa ianao afaka mahita ny tanjaka sy ny fahalemena izy ireo. Ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny maka izay rehetra manampy anao, tsy voatery hoe hanao ny paikadin'izy ireo hitovy tanteraka izany, fa ny mianatra avy amin'izy ireo ary manampy ny fombanao manokana aminy.
Farany, apetraho ny paikady, milalao milamina ary milalao mangarahara hatrany. Ireto no toerana lehibe hahatongavana ho mpilalao Bayonetta tsara indrindra 3. Araho ireto torohevitra ireto dia ho akaiky kokoa anao ianao lasa kintana.
Navoaka tamin'ny 13 Aogositra 2021
Ny fampahalalana rehetra ilainao ho fantatra mba manomboka milalao Elden Ring
Elden Ring dia iray amin'ireo lalao izay dia manampy mpanaraka bebe kokoa. Ny fomba maharesy lahatra ny fampandrosoana sy ny fampandraisana anjara ny mpilalao dia mahatonga ny mpanaraka azy hiafara amin'ny tsy fivadihana kokoa ary ireo izay mbola tsy nankafy azy dia te hilalao azy io.
Ho an'ireo izay manomboka manandrana amin'ny Elden Ring, dia manolotra ity torolàlana feno ity izahay izay misy torohevitra tena manampy. Amin'ity fampahalalana ity dia azonao atao ny mahazo fahitana mazava kokoa momba ny zavatra tokony hataonao mba hanombohana milalao nefa tsy diso hevitra tanteraka.
Daty famoahana lalao
Ireo mpanaraka an'i Elden Ring Tokony efa miomana amin'ny premiere ny lalao hitranga tsy ho ela izy ireo daty namoahana, izay azon'izy ireo atao misy consoles-misy. Miaraka amin'ny fahafaha-manao lalao video tsara dia andrasana ny fahatongavan'ilay lalao video mba hahafahany mankafy ireo zava-baovao rehetra entiny miaraka aminy.
Torohevitra hivoahana eo amin'ny Elden Ring
Mikasika ihany koa, manomboka mahatsiaro ny toro-hevitra hanampy anao, amin'ny fotoana an-tanan'ny Elden Ring anao, afaka mahazo lalao amin'ny fampisehoana tsaratsara kokoa ianao. Manana vitsivitsy ho anao izahay.
Mahazoa traikefa sy ambaratonga: Ny fandrosoana sy ny fivoarana dia hanome anao fotoana bebe kokoa ary hanana tombony mihoatra ny sisa amin'ireo mpilalao ianao. Amin'izany dia hiakatra ianao ary hanatsara ny fahafahan'ny toetranao, ankoatry ny fahaizanao.
Jereo hoe inona no an'i Elden Ring: Tsy hisy fitaovam-piadiana tsara noho ny vaovao. Ny fitadidiana ao an-tsaina hoe inona avy ireo fitaovana apetrak'ilay lalao video hialanao amin'ny sakana dia zava-dehibe hamahana olana haingana
Miaina fomba isan-karazany amin'ny filalaovana: Indraindray a fomba filalaovana Izy io dia miasa ho antsika, fa amin'ny fanandramana safidy vaovao dia manana vintana tsara kokoa ianao hikaroka fomba hanatsarana sy hahatratrarana ny tanjona amin'ny fahaizana lehibe kokoa.
Ataovy ny toe-javatra ilainao: Ny fanaovana ny fanovana azonao atao eo amin'ny sehatry ny lalao dia afaka manampy anao hifanaraka amin'ny fahamoran'ny lalao. Ny fanitsiana azonao atao dia mety misy ifandraisany amin'ny efijery, ny feo, ny fanaraha-maso na izay mamela anao hilalao tsaratsara kokoa.
Amin'ny fomba ahoana no ahafahanao milalao Elden Ring an-tserasera?
Soa ihany fa ho afaka milalao ny lalao amin'ny console isan-karazany sy amin'ny solosainao ianao, noho izany tsy misy fialantsiny hampiatoana ny fanandramana ilay kinova izay havoaka. Ny sasany amin'ireo safidy hafa izay ho hita fa mankafy azy amin'ny console dia PlayStation y Xbox, izay ahafahana manao milalaova amin'ireo mpilalao sisa amin'ny Internet na milalao lalao ao an-trano raha tianao.
Ny tena tanjon'ny mandefa amin'ny kinova samihafa dia ny lalao video izay mahavita mahatratra ny mpijery betsaka indrindra ary koa mizara amin'ny mpilalao hafa dia mora sy mampiala voly. Araka ny tsironao, azonao atao ny misafidy izay safidy natolotry Elden Ring.
Toy izany koa, ny dikanteny rehetra dia mampihomehy ary manolotra ny mety mankafy fanandramana tsara dia tsara isam-batan'olona sy vondrona.
Misaotra amin'ireo zotram-pifandraisana ireo dia afaka mahazo Elden Ring
Ny zavatra voalohany tokony hataonao mividy Elden Ring dia ny mankany amin'ny magazay izay akaiky indrindra ny trano fonenanao, na ilay mankany aminao foana. Aorian'ny daty famoahana ny lalao sy amin'ny andro manaraka dia ho hitanao fa azo jerena amin'ny sehatra rehetra ao aminy.
Ho an'ny rehetra tena mpilalao, tsara kokoa hatrany ny manana ny kinova am-boalohany ny lalao video. Amin'izany fomba izany dia miara-miasa amin'ny famoronana lalao video bebe kokoa izy ireo ary manohana ireo franchise lehibe.
Saingy tsy ny tranokala ihany no hahitanao azy fa ho afaka hividy azy io koa ianao magazay lalao video an-tserasera na in sehatra an-tserasera amin'ny alàlan'ny fananana kaonty fotsiny dia azonao atao ny mividy.
Si mividy amin'ireto fivarotana an-tserasera ireto ianao, mamonjy fotoana sy ezaka ianao ary ho tonga eo am-baravaranao ny filaharanao, na azonao atao koa ny mividy kinova virtoaly, misintona azy ary mametraka azy amin'ny console anao.
Ankoatry ny fivarotana lalao video, misy ny safidy hilalaovana amin'ny alàlan'ny fanakaramana fonosana famandrihana. Amin'ity tranga ity dia tsy mividy lalao ianao, fa ny zo hampiasa lohateny maro karazana mandritra ny fotoana maharitra. Izany no tranga misy an'i Stadia na Steam.
Ny zavatra tsara indrindra amin'ireo sehatra ireo dia ny vidiny. Aloavy ny famandrihana tsy dia lafo loatra noho ny fividianana lalao video, miampy dia manamora ny fidirana amina lohateny maro karazana.
Ahoana ny fomba lehibe kokoa ao amin'ny Elden Ring?
Isika rehetra dia manomboka amin'ny maha olom-baovao antsika isaky ny miaina zavatra hafa isika, na inona na inona zavatra niainantsika taloha tany amin'ny faritra hafa, fanombohana zavatra hatrany am-piandohana dia traikefa vaovao foana, fa miala sasatra, amin'ny ezaka dia ho lasa manam-pahaizana manokana ianao.
Araka ny efa nolazainay taminao, ianao dia tokony hampihatra amin'ny zavatra rehetra antenainao hatao amin'ny fomba tsara. Amin'ity indray mitoraka ity, lalao video. Arakaraka ny anaovanao fanazaran-tena no azonao atao mianatra ny tsiambaratelon'ny Elden Ring. Izany no izy, raha izay no tadiavinao ho mpilalao Elden Ring tsara indrindra, avy eo izahay dia mamporisika anao hanomboka hanao fanazaran-tena, hahatratra izany amin'ny fikirizana ianao.
Mba ho tsara indrindra dia mila ihany koa mifanena amin'ny mpanohitra anao. Ny fomban'ny fihetsik'izy ireo, ny paikadiny ary ny fahaizany. Ho an'ity dia tsy maintsy dinihinao tsara izy ireo. Izy ireo dia antsipiriany kely izay tena ilaina tokoa handresena azy ireo. Ho azonao atao ny mahita hoe inona ny tombony sy ny fahalemeny. Raiso izay mahasoa anao ary ampiasao ny ratsy. Raha manao an'izany amin'ny fomba mandaitra ianao dia afaka manala azy ireo mora foana. Na NPC izy ireo na tena mpilalao dia mampiasa fahaiza-manao sy paikady avokoa izy ireo, raha fantatrao izy ireo dia azonao atao ny mamantatra ny fomba hikapohana azy ireo mora foana ary afaka miavaka ianao.
Raha vantany vao hitanao hoe inona ny lafy ratsiny, kitiho izy amin'izay maharary azy indrindra ary reseo izy. Tombony lehibe foana ny hoe dingana iray mialoha.
Andraso anefa fa tsy mifarana amin'ny mpifanandrina ny raharaha. Hankany amin'ny teboka tena hatanjaka ianao, ka ho tonga mpanohitra anao amin'ny fomba tsara. Halalino ny paikadinao manokana ary manaova fivoarana ho tsara kokoa isan'andro. Afaka mihatsara hatrany ianao.
Ankoatra izany tadiavo ny fahalemen'ny mpifaninana aminao, ho hitanao ihany koa ny tanjany. Eo amin'ny lalanao mankany amin'ny tsara indrindra dia mila mamantatra izay hosotroinao isaky ny misy fotoana. Raha izany no izy dia tsy ratsy ny mahita izay lafin-javatra mety ho an'ireo mpilalao hafa ary mampifanaraka azy ireo amin'ny fomba filalaonao.
Farany, milamina, aza mihetsika haingana ary manolotra tetika tsara hanamora ny fihetsikao amin'ny fomba marina, hahatratrarana ny vokatra tsara indrindra. Raha mahavita manaraka ireto torolàlana ireto ianao dia afaka ny tsara indrindra amin'ny Elden Ring.
Navoaka tamin'ny 5 Aogositra 2021
Ankoatra ny lalao lalao tsara sy ratsy 2
Iray amin'ireo lalao izay dia mahazo mpankafy bebe kokoa Ary ny fandraisana andraikitra bebe kokoa dia Beyond Good & Evil 2. Ity lalao ity dia manome anao fomba mahafinaritra sy mahasarika hanatanterahana lalao tsy azo resena, na vaovao ianao na efa nilalao ilay lalao teo aloha.
Ankehitriny, ny fampahalalana atolotray anao amin'ity torolàlana ity dia mety ho tena ilaina raha manomboka milalao Beyond Good & Evil 2 ianao ary te hanana tombony kely. Miaraka amin'ny torohevitra homenay anao eto ambany, mety tsy ho manam-pahaizana ianao, saingy na izany aza, hanana fampahalalana fototra izay hanampy anao ianao
Rahoviana ny première an'ny Beyond Good & Evil 2?
Efa navoaka fa ny daty famoahana Mihoatra ny tsara sy ny ratsy 2 ho ilay daty namoahana, manomboka amin'ity fotoana ity, ny mpanaraka azy dia tsy afaka ny tsy hitady fatratra ny hahafantatra izay mety ho fisehoan-javatra vaovao azo aseho ao misy consoles-misy.
Fetsy hiavaka amin'ny Beyond Good & Evil 2
Ka tsara raha manomboka manonona ny toro-hevitra hanampy anao, ka rehefa Beyond Good & Evil 2 dia eo am-pelatananao, mankafy lalao misy valiny tsara lavitra. Manana vitsivitsy ho anao izahay.
Aza mitsahatra mampihatra sy mampiakatra ny haavo anao: Ny fanatanterahana ny paikadinao sy hahatrarana ambaratonga ambonimbony dia hahatonga anao ho mpilalao tsaratsara kokoa. Ankoatr'izay, ny fiakarana amin'ny lalao dia manokatra fitaovana izay hanampy anao hahatratra ny tanjonao.
Jereo izay atolotry Beyond Good & Evil 2: Tsy misy fitaovam-piadiana ilaina kokoa noho ny fampahalalana. Ny fitadidiana ao an-tsaina hoe iza no fitaovana apetraky ny lalao video anao handresena ireo sakana dia tsara indrindra hamaliana olana haingana
Ampiharo amin'ny fomba samihafa ny paikadinao: Raha mihoatra paikady Arakaraky ny andranao no ahafahanao mahita na manao fihetsika izay hahatonga anao ho mpilalao mahay indrindra.
Manaova fanamboarana ho an'ny fanaraha-maso sy ny toerana: Amboary ny vahaolana, ny fifehezana ary ny fikirana rehetra mamela azy hanamora ny filalaovana anao. Ny fandaminana ny fanaraha-maso dia manome anao fahafaha-manao dock ny lalao amin'ny fiononanao hahazoana vokatra mahomby kokoa mandritra ny lalao.
Moditiesities azonao andramana Beyond Good & Evil 2
Ny kinova vaovao amin'ny Beyond Good & Evil 2 dia mandrakotra ny tsiro rehetra, raha mpankafy konsole ianao na aleonao ny PC, ianao dia ho afaka hanandrana ny lalao video amin'ny fomba maoderina. Ho an'ny console, azonao atao izany PlayStation, Xbox , ankoatry ny hafa, manome anao fotoana hanandramana any an-trano na mifandray amin'ireo mpilalao hafa an-tserasera.
Fa azonao atao koa milalao amin'ny rahona amin'ny alàlan'ny sehatra toa an'i Steam sy Stadia ho an'ny solosaina. Amin'ireny dia azonao atao ny tsy misy ny console farany eo amin'ny tsena na ny PC misy endri-javatra mandroso mankany milalao lalao mahafinaritra.
Ny tanjon'ny avoaka amin'ny kinova samihafa dia ny hahatratra ny mpihaino lehibe indrindra ary ny lalao miaraka amin'ireo mpilalao hafa dia azo idirana sy mahafinaritra. Miankina amin'ny tsironao, afaka misafidy ireo safidy natolotry ny Beyond Good & Evil 2 ianao.
Raha tsy azonao atao ny mahazo kinova maromaro araka izay tadiavinao ary mila manapa-kevitra iray monja ianao dia aza malahelo, ny tsirairay amin'ireo dikanteny dia manana fahafinaretana lehibe ary manome toky fa ho velona ianao Ny lalao tsy azo resena dia samy irery sy amin'ny mpilalao hafa.
Aiza no hividianana Beyond Good & Evil 2?
Ny zavatra voalohany azonao atao mitondra Beyond Good & Evil 2 dia ny mankany amin'ny magazay izay akaiky indrindra ny tranonao, na ilay mankany aminao foana. Aorian'ny daty famoahana ny lalao sy amin'ny andro ho avy dia ho hitanao fa mety amin'ny sehatra rehetra iasany.
Ara-dalàna amin'izao andro izao izay ireo mpankafy console toy ny PlayStation, na Xbox dia mankafy ny fananana kinova voalohany amin'ny famoahana rehetra.
Ary raha tsy manana fivarotana lalao video eo akaiky ianao dia aza manahy fa afaka mividy ny lalao video tianao indrindra ianao amin'ny magazay lalao video an-tserasera, na ao sehatra an-tserasera, raha manana kaonty hividy ianao.
Mividiana amin'ny magazay an-tserasera Izy io dia mitovy amin'ny fividianana trano, soa aman-tsara. Ho fanampin'izany, ity safidy ity dia mamela ny lohateny ho eo am-baravaran'ny tranonao na, raha tianao, dia azonao atao ny misafidy ny kinova virtoaly, izay apetrakao mivantana amin'ny console anao.
Misy ihany koa ny serivisy sehatra lalao video famandrihana. Amin'ireto sehatra ireto dia azonao atao ny milalao mampiasa ireo lozisialy an-tsehatra, mampiasa serivisy mipetraka ao anaty rahona. Mba hanaovana izany dia mila manana fifandraisana Internet fotsiny ianao ary mandoa ny fisoratana anarana.
Ny fandraisana io serivisy io dia midika, amin'ny fotoana fohy, a ambany outlay noho ny fahazoana lalao video tany am-boalohany, miampy ny filalaovana lalao maro isan-karazany mandritra ny fotoana voafaritra.
Soso-kevitra vitsivitsy mba ho tsara indrindra amin'ny Beyond Good & Evil 2
Tsy misy marina kokoa noho ilay hoe Mampanan-talenta ny fampiharana, ary ny fomba tsara indrindra hanatsarana zavatra iray dia ny fampiharana azy. Arakaraka ny anaovanao asa iray no mampitombo ny fahaizanao.
Io foto-kevitra io ihany koa dia isaina ho an'ny lalao video. Raha maniry mafy ny ho mpampianatra ianao dia mila manao fanazaran-tena. Amin'izany, ny atidohanao dia hampifanaraka amin'ny baiko sy ny faharanitan-tsaina artifisialy Beyond Good & Evil 2, mamorona drafitra sy paikady tsaratsara kokoa. Ka raha tianao ho mpampianatra ao amin'ny Beyond Good & Evil 2, manomboka manazatra.
Misy zavatra hafa afaka manampy anao betsaka diniho ny fihetsiky ny fahavalonao. Ny fahafantarana ny hetsiky ny fahavalo sy ny famakafakana ny paikadin'izy ireo dia mety hahatonga anao hanakaiky kokoa ny fahalemeny. Ho azonao atao ny mahita hoe inona ny tombony sy ny fahalemeny. Ianao koa mila mahay mihetsika ny fahavalonao. Na NPC izy ireo na tena mpilalao dia mampiasa fahaiza-manao sy tetika avokoa izy ireo, raha ianaranao izany dia ho hitanao ny fomba famongorana azy ireo mora foana ary ho tsara indrindra.
Rehefa hitanao hoe inona ny fahalemeny, alao izy amin'izay maharary azy indrindra ary vonoy. Ny mijanona dingana iray eo alohan'izay dia midika ho fotoana tsara kokoa.
Toy izany koa, fantaro izay lesoka misy anao Hanampy anao amin'ny fanamafisana azy ireo izany ary hahatonga anao hatanjaka kokoa, koa avereno jerena koa ny tetikao ary maharesy azy ireo isaky ny manana fotoana mety ianao. Tsy maninona raha nanampy anao taloha izy ireo, azo antoka fa afaka mitombo bebe kokoa ianao.
Del fanadihadiana ny mpanohitra anao Hahita karazan-javatra roa ianao: ireo izay ataony tsara ary ireo izay tsy dia hainy loatra. Amin'ireo ratsy dia efa naneho hevitra izahay; araraoty izy ireo. Tsara ny mianatra amin'ireo izay mahomby. Tsy ny maka tahaka azy fotsiny, fa tsara kokoa ny manitsy azy amin'ny paikadinao sy ny fomba filalaovanao, mba hanohizana amin'ny toerana anaovanao fampisehoana tsara.
Farany, aza manao zavatra malaky, manomana tsara ny paikadinao ary mametraha tanjona fohy. Amin'izany no hahatratraranao tsikelikely ny tanjonao. Raha manaraka ireo torohevitra ireo ianao, dia ho akaiky ny maha-olona anao isan'andro ny tsara indrindra amin'ny Beyond Good & Evil 2.
Navoaka tamin'ny 2 Aogositra 2021
Torolàlana momba ny lalao video Dead Island 2
Dead Island 2 dia iray amin'ireo lalao video izay dia mahazo mpankafy bebe kokoa. Ny fomba mahafinaritra ny famelabelarana sy ny fampandraisana anjara ny mpilalao dia mahatonga ireo izay milalao azy ho lasa mahatoky kokoa ary ireo izay mbola tsy nilalao dia te hanandrana azy.
Ho an'ireo izay vaovao amin'ny Dead Island 2 dia manolotra ity torolàlana feno ity izay misy toro-hevitra tena ilaina izahay. Amin'ity fampahalalana ity dia afaka manana hevitra misimisy kokoa momba ny zavatra tsy maintsy ataonao ianao mba hanombohana milalao nefa tsy ho very tanteraka.
Efa imasom-bahoaka fa ny fotoana fandefasana ny Dead Island 2 ho ilay daty namoahanaHatramin'ny nanomezana izany vaovao izany, ny mpanaraka azy dia tsy afaka nanalavitra ny fientanam-po hahafantatra izay mety ho vokatr'ity kinova ity izay azo ankafizina misy consoles-misy.
Torohevitra hisongadinana ao amin'ny Dead Island 2
Ity no fotoana mety indrindra hilazana ny sasany aminao fika hahafahanao manao lalao ao amin'ny Dead Island 2 miaraka amin'ny valiny tsaraKa rehefa navoaka ny lalao dia ho hitanao fa dingana iray mialoha. Ireto ambany ireto.
Ampitomboy ny zavatra niainanao sy ny haavonao: Ny fanatsarana sy ny fivoarana dia hanokatra varavarana ho anao ary hahazo tombony mihoatra ny sisa amin'ireo mpilalao ianao. Ity no fomba hiakaranao sy hanatsaranao ireo mety ho toetranao, ankoatry ny fahaizanao.
Ianaro ireo fitaovana azonao ampiasaina amin'ny Dead Island 2: Ny zavatra iray izay hampandroso anao dia ny fahalalana ireo fitaovana omen'ny lalao video anao. Amin'ny fahalalanao ny fomba sy ny fotoana hampiasana izay ampiasain'ny Dead Island 2 ho anao, dia azonao atao ny mampiasa azy ara-potoana hahatratrarana ny tanjona
Manandrama fomba filalaovana maro: Indraindray a fomba filalaovana Izy io dia miasa ho antsika, fa amin'ny fanandramana safidy vaovao dia manana vintana tsara kokoa ianao hahita fomba hanatsarana sy hahatratrarana mora kokoa ny tanjona.
Ampifanaraho amin'ny zavatra tianao ny toe-javatra: Ny fananana lalao izay manome anao fampiononana dia manome anao fahafaha-manao vokatra tsara kokoa. Ny fanovana ny efijery sy ny feo ary ny fandaminana ny fanaraha-maso araky ny safidinao dia tena manampy.
Modities izay ahafahanao milalao Dead Island 2
Tsy hisy olona tsy handray anjara, Dead Island 2 dia ho azon'ireo izay tia konsole na PC, mampisy ny maoderina roa. Anisan'ireo hampionona izay ahafahana mankafy ny lalao video ny PlayStation y Xbox, izay azon'ny mpilalao atao milalao eo an-toerana na amin'ny fifandraisana amin'ireo mpilalao hafa an-tserasera.
Fa ho hita ihany koa milalao amin'ny rahona amin'ny alàlan'ny pejy toa an'i Steam sy Stadia amin'ny PC. Ny fampiasana azy ireo dia tsy ilaina ny manana ny console farany eo amin'ny tsena na solosaina misy fiasa manokana mankafy lalao mahafinaritra be
Toy izany koa, hisy ny fotoana milalao amin'ny rahona, avy eo dia tsy mila manana ekipa mandroso ianao hanandramana ny Dead Island 2. Amin'ny sehatra mpizara toy ny Steam sy Stadia, dia ho afaka milalao lalao mahafinaritra avy hatrany.
Mazava ho azy, ny tanjona dia ny hampifaly ny mpihaino marobe indrindra. Ho an'ity hahita isan-karazany ny Dead Island 2 ianao izay mamaly ny filàna maro, ny zavatra rehetra dia miankina amin'ny safidin'ny olona tsirairay rehefa misafidy safidy mety indrindra.
Ny dikanteny tsirairay dia manome fahafinaretana lehibe, koa aza manahy raha mila manapa-kevitra amin'ny iray amin'izy ireo ianao. Manana traikefa nahafinaritra izay ahafahanao manana fanandramana manokana sy amin'ny olon-kafa Milamina io.
Amin'izany dia afaka mividy Dead Island 2 ianao
Para manjary maty nosy 2 mila mandeha fotsiny ianao amin'ny Play store akaiky kokoa izany na mankanesa amin'ilay atokisanao bebe kokoa. Aorian'ny fandefasana dia ho hitanao amin'ny fomba mora azo ny maoderina rehetra.
Izany no mahazatra indrindra amin'ny rehetra lalao ho an'ny konsoly toy ny PlayStation, na Xbox; consoles fa ny mpampiasa azy dia mahazo aina sy tia ny tompony kinova am-boalohany ny lalao.
Fa tsy ny toeram-pisakafoanana ihany no safidy. Raha tsy manana orinasa eo akaiky eo ianao, na tsy te handao ny trano fonenanao fotsiny ianao dia afaka mividy azy ireo ao magazay an-tseraserana sehatra an-tserasera.
Ny teboka matanjaka amin'ireo fivarotana ireo dia tsy tokony hiala ao an-tranonao ianao hividy. Tonga eo am-baravaranao mihitsy ny lalao, na azonao atao ny misintona azy aorian'ny famoahana ny fandoavam-bola ary apetraho eo noho eo.
Fa koa ny sehatra toa an'i Stadia na Steam, dia ahafahanao mankafy aorian'ny fandoavambola, amin'ny fampiasana ireo mpizara azy ireo, izay midika fa afaka milalao ianao isaky ny mifandray amin'ny Internet sy eo ambanin'ny famandrihana.
Ny fampiasana an'io serivisy io dia midika hoe, ao anatin'ny fotoana fohy, a ambany ny karama noho ny fahazoana lalao video tany am-boalohany, miampy ny fampiasana lohateny maro mandritra ny fotoana iray.
Ahoana no ahatsarana ny soa any Dead Island 2?
Isika rehetra dia manomboka ny maha olom-baovao antsika isaky ny miaina zavatra vaovao isika, na inona na inona fahalalana taloha nananantsika tany amin'ny faritra hafa, ny fanandramana zavatra avy hatrany am-boalohany dia miteraka fahatsapana hafa, saingy milamina, miaraka amin'ny asa dia lasa manam-pahaizana manokana ianao.
Toy izany koa ny lalao video. Arakaraka ny anananao traikefa dia ny fandraisanao valiny tsara kokoa sy ny ati-dohanao manana fahaizana manangana taktika tsara kokoa. Ka raha izay no tadiavinao dia mianatra milalao Dead Island 2 ny tokony hataonao dia ny mahareta ary manazatra matetika.
Ny zavatra iray hafa izay afaka manamora ny asanao dia ny diniho ny paikadin'ny fahavalonao. Ny faminaniana ny hetsiky ny fahavalo sy ny fahazoanao ny paikadin'izy ireo dia ahafahanao manakaiky kokoa ny famongorana ireo toerana malemy. Ho hitanao ny mety sy ny ratsy ataony. Ianao koa mila mianatra milalao amin'ny mpanohitra anao. Na NPC izy ireo na tena mpilalao dia mampiasa fahaiza-manao sy tetika avokoa izy ireo, raha fantatrao izy ireo dia afaka mahita ny fomba handresena azy ireo amin'ny fomba mora sy ho tsara indrindra.
Amin'ny fahafantarana izay ataon'ny fahavalo tsara sy izay ratsy ataony, dia hahazo tombony ianao noho izy. Hiankina amin'ny zavatra niainanao ny hahafahanao manararaotra an'io tombony io handresena.
Ankoatra izany, fantaro hoe inona ny fahalemenao Hanampy anao amin'ny fanamafisana orina azy ireo izany ary hahatonga anao hatanjaka kokoa, koa ianaro koa ny paikadinao ary hatsarao isaky ny manana fotoana mety ianao. Tsy maninona raha nanompo anao teo aloha izy ireo, azo antoka fa afaka manatsara.
Del fanadihadiana ny mpanohitra anao Hahafantatra zavatra roa ianao: ny zavatra mahasoa azy ireo sy ny zavatra tsy dia tsara aminy. Amin'ireo ratsy dia efa maneho ny hevitsika isika; araraoty izy ireo. Ny zavatra tsara dia tsara ianarana. Tsy ny fanaovana azy io ihany, fa ny tena idealy dia ny mampifanaraka azy amin'ny paikadinao sy ny fomba filalaovanao, mba hanohizanao ny tany izay itonianao.
Ary farany, aza manao adalana, mifikitra amin'ny paikadinao ary mametraha tanjona fohy. Amin'izany no hahafahanao manatratra ny tanjonao tsikelikely. Raha manaraka ireo torohevitra ireo ianao dia ho akaiky kokoa ny maha-izy anao iray amin'ireo tsara indrindra any Dead Island 2.
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao mba hahafahanao manomboka mankafy Beyond Good & Evil 2
Iray amin'ireo lalao video izay miha malaza io Ary ny fisondrotana bebe kokoa dia Beyond Good & Evil 2. Ity lalao video ity dia manome anao traikefa nahafinaritra sy nahasarika hahafahanao mampivelatra lalao tsy manam-paharoa, na vao manomboka ianao na efa nilalao ilay lalao teo aloha.
Ho fanampin'izay, ny fampahalalana amin'ity toro-lalana ity dia mety ho tena ilaina raha vao manomboka amin'ny Beyond Good & Evil 2 ianao ary te hanana tombony manokana. Miaraka amin'ny tolo-kevitra omenay anao ho anao izao, mety tsy ho manam-pahaizana ianao, fa hahazo fampahalalana fototra izay hanampy anao
Fans of Mihoatra ny tsara sy ny ratsy 2 dia miomana handray ny premiere an'ny lalao amin'ny daty namoahana, izay azonao atao ny mankafy misy consoles-misy. Miaraka amin'ny fahafaha-manao lalao video tsy mampino, ny fahatongavan'ilay lalao video dia antenaina fa afaka mankafy ny vaovao rehetra ho entiny.
Torohevitra hiavaka amin'ny Beyond Good & Evil 2
Mazava fa io no fotoana tsara indrindra omena anao fika izay manamora ny fahaizanao manao lalao mahatalanjona rehefa eo an-tananao ny Beyond Good & Evil 2. Ny sasany dia izao manaraka izao.
Ampitomboy ny zavatra niainanao ary atsangano ny haavonao: Ny fandrosoana sy ny fivoarana dia hanome anao fotoana bebe kokoa ary hanana tombony ianao raha oharina amin'ireo mpilalao sisa. Izany no fomba handresenao sy hanatsarana ny fahafahan'ny toetranao, ankoatry ny fahaizanao.
Jereo izay omen'ny Beyond Good & Evil 2 anao: Raha misy zavatra hanome tombony anao dia "fantaro". Ny famaritana izay fitaovan'ny lalao sy ny fomba fampiasana azy ireo dia tena ilaina mba handresena ireo vato misakana mety hitranga amin'ny lalao
Mampiasà paikady vaovao: Na dia efa nanao a tetika Amin'izay ahitanao fahafaham-po, manandrama zava-baovao foana, satria manome anao ny fahitana teknika mahasoa ahafahanao mihatsara.
Ovao ny toe-javatra ilainao: Ny fanatanterahana ireo fiovana takiana aminao amin'ny filalaovana lalao video dia hanampy anao hiatrika moramora rehefa milalao. Ny iray amin'ireo fanovana hanovana dia mety misy ifandraisany amin'ny famahana, ny feo, ny fanaraha-maso na izay mamela anao hanao tsara kokoa.
Sehatra izay hilalaovana Beyond Good & Evil 2
Ny kinova vaovao an'ny Beyond Good & Evil 2 dia natao ho an'ny rehetra, raha mpankafy console ianao na aleonao ny PC, ny lalao dia azo zahana amin'ny fomba maoderina. Ho an'ny console, azonao atao izany PlayStation, Xbox ary ny hafa, manome anao fotoana hanandramana any an-trano na mifandray amin'ny olon-kafa amin'ny Internet.
Toy izany koa no hahitana izany milalao amin'ny rahona mampiasa pejy toa an'i Steam sy Stadia amin'ny solosaina. Amin'ireto dia tsy ilaina ny manana console farany eo amin'ny tsena na solosaina manana toetra manokana manaova lalao mahafinaritra
Izay nofidinao dia hifandraisany bebe kokoa amin'ny safidinao sy ny teti-bolanao. Izao no azonao atao mahita Beyond Good & Evil 2 amin'ny kinova samihafa. Ny tadiavina dia ny hahatratra ny mpihaino betsaka indrindra ary hanao ny hankafizanao ny lalao ho mora ho an'ny rehetra.
Toy izany koa, ny tsirairay amin'ireo kinova dia manana safidy mampiala voly ary manome izay azo atao mankafy fanandramana tsara milalao tsirairay na miaraka amin'ny vondrona.
Mila mividy Beyond Good & Evil 2 aho, aiza no alehako?
Ny dingana voalohany mahazo Beyond Good & Evil 2 dia ny mitsidika ny magazay izay akaiky indrindra ny tranonao, na ilay mankany aminao foana. Raha vantany vao tonga ny daty famoahana ny lalaoo, ary amin'ny andro manaraka, dia azonao atao ny mahita azy amin'ny sehatra rehetra.
Izany no tranga lalao ho an'ny konsoly toy ny PlayStation, na Xbox. Indrindra, ho an'ireo mpankafy rehetra izay miteraka fahatsapana tsara amin'ny fananana azy ireo kinova voalohany amin'ny lalao ankafizinao.
Na izany aza, tsy amin'ny tranombarotra ara-batana ihany no ahazoanao azy fa ho azonao raisina ihany koa magazay lalao video an-tserasera na in sehatra an-tserasera izay ilainao fotsiny manana kaonty iray hanaovana ny fividianana.
Si mividy amin'ireto fivarotana an-tserasera ireto ianao, mamonjy fotoana sy miasa ianao ary hahatratra ny tranonao ny lalao ataonao, na afaka mividy kinova virtoaly koa ianao, sintomy izany ary apetaho amin'ny console.
Ankoatra ny fivarotana lalao video, misy ny safidy hafa amin'ny filalaovana fonosana famandrihana. Amin'ity tranga ity dia tsy mividy lalao ianao, fa ny zo hankafy lalao isan-karazany mandritra ny fotoana voafaritra. Izany no tranga misy an'i Stadia na Steam.
Ny fampiasana an'io serivisy io dia midika hoe, ao anatin'ny fotoana fohy, a ambany ny karama toy izay mividy lalao video tany am-boalohany, miampy anao hahafahanao mankafy lohateny maro mandritra ny fotoana manokana.
Ahoana no hianarana hilalao Beyond Good & Evil 2?
Isika rehetra dia manomboka amin'ny maha olom-baovao antsika isaky ny miaina zavatra vaovao isika, na inona na inona zavatra niainantsika taloha tamin'ny lafiny hafa, fanombohana zavatra iray hatrany am-piandohana dia traikefa hafa foana, fa milamina, miaraka amin'ny fampiharana dia ho lasa manam-pahaizana manokana ianao.
Ahoana ny Mampanan-talenta ny fampiharana azo ampiasaina amin'ny lalao koa. Arakaraka ny anaovanao fanazaran-tena no ahafahanao manatsara ny fanaraha-maso sy ny valin'ny AI Beyond Good & Evil 2. Ka raha maniry ny ho iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny Beyond Good & Evil 2, fenoy faharetana sy finiavana tsara ianao ary manaova fanazaran-tena mandritra ny fotoana maharitra.
Misy zavatra hafa manampy amin'ny fampitomboana ny teknikao dia ny mandalina ny mpanohitra anao. Azonao atao ny mamantatra izay tsara sy ratsy ataony. Ianao koa mila mahay milalao ny mpanohitra anao. Na NPC izy ireo na tena mpilalao dia samy mampihatra fihetsiketsehana sy paikady izay, raha fantatrao izy ireo, dia ho afaka mamantatra ny fomba hikapohana azy ireo mora foana ianao ary ho tsara indrindra.
Rehefa hitanao hoe inona ny fahalemeny, kitiho izy amin'izay maharary azy indrindra ary reseo izy. Tombony lehibe foana ny hoe dingana iray mialoha.
Tahaka ny nandinihanao ny mpifaninana aminao dia tsy maintsy atao koa izany avereno jerena ary fantaro ny teknika anao manokana ary ny valiny omeny anao. Na dia manao zavatra tsara aza ianao dia azo antoka fa afaka manatsara amin'ny fotoana iray. Fakafakao isan'andro ny tetikadinao ary fantaro hoe aiza no mety hihatsara.
Ankoatra izany alao ny debuff an'ny fahavalonao, ho hitanao ihany koa ny tanjany. Amin'ny fikatsahanao ny ho tsara indrindra dia tokony ho fantatrao izay hosamborina isaky ny misy fotoana. Raha izany no izy dia tsy ratsy ny mahita hoe inona no miasa amin'ny hafa ary mamolavola azy amin'ny fomba filalaovanao.
Farany, aza mihetsika haingana, mifikitra amin'ireo paikadinao ary mametraha tanjona fohy. Amin'izany no hahatratraranao tsikelikely ny tanjonao. Raha manaraka ireo torohevitra ireo ianao dia ho akaiky kokoa ny maha-izy anao ny tsara indrindra amin'ny Beyond Good & Evil 2.
Copyright © 2021 · Zo rehetra voatokana · AdraInformatica
Retro taona 90 Lohahevitra biolojika · RSS fahana · miditra